Wararka - Rizobacter ayaa daawaynta abuurka-bio-seed ka bilaabay Rizoderma ee Argentina
Rizobacter waxa ay daawaynta abuur-bio-seed ka soo saartay Rizoderma gudaha Argentina
Dhawaan, Rizobacter wuxuu bilaabay Rizoderma, biofungicide loogu talagalay daawaynta abuurka soybean ee Argentina, kaas oo ka kooban trichoderma harziana kaas oo xakameynaya cudurada fangas ee miraha iyo ciidda.
Matias Gorski, oo ah maamulaha noolaha caalamiga ah ee Rizobacter, wuxuu sharxayaa in Rizoderma ay tahay fungicide daawaynta abuur bayooloji ah oo ay soo saartay shirkadu iyada oo kaashanaysa INTA (Machadka Qaranka ee Tignoolajiyada Beeraha) ee Argentina, kaas oo loo isticmaali doono iyada oo lala kaashanayo xariiqda wax soo saarka inoculant.
"Isticmaalka alaabtan ka hor intaan la beerin waxay abuurtaa shuruudo soyanka si ay ugu koraan deegaan dabiici ah oo nafaqo leh oo la ilaaliyo, taas oo kordhinaysa wax-soo-saarka hab waara iyo hagaajinta xaaladaha wax soo saarka ciidda," ayuu yidhi.
Isku darka tallaalka iyo biocides waa mid ka mid ah daawaynta ugu cusub ee lagu dabaqo digirta. In ka badan toddobo sano oo tijaabo goobeed ah iyo shabakad tijaabo ah ayaa muujisay in alaabtu si fiican u qabato ama ka fiican tahay kiimikooyinka isla ujeeddo la mid ah. Intaa waxaa dheer, bakteeriyada ku jirta inoculum waxay si aad ah ugu habboon tahay qaar ka mid ah noocyada fangas ee loo isticmaalo caanaha daaweynta abuurka.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka bayoolojigani waa isku-darka habka saddex-geesoodka ah ee ficilka, kaas oo si dabiici ah u xannibaya soo noqoshada iyo horumarinta cudurrada ugu muhiimsan ee saameeya dalagyada (fusarium wilt, simulacra, fusarium) waxayna ka hortagtaa suurtogalnimada iska caabbinta pathogene.
Faa'iidadani waxay ka dhigaysaa badeecada doorasho istiraatijiyadeed oo loogu talagalay soosaarayaasha iyo la-taliyayaasha, maadaama heerarka cudurada hoose la gaari karo ka dib codsiga bilowga ah ee foliicide, taasoo keentay hufnaanta codsiga.
Sida laga soo xigtay Rizobacter, Rizoderma ayaa si fiican u soo bandhigtay tijaabooyinka gudaha iyo shabakada tijaabada ee shirkadda. Adduunka oo dhan, 23% miraha soybeanka waxaa lagu daaweeyaa mid ka mid ah tallaalada uu sameeyay Rizobacter.
"Waxaan la shaqeynay warshado ka kala socda 48 waddan, waxaana gaadhnay natiijooyin aad u wanaagsan. Habkan shaqo wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka jawaabno shuruudahooda oo aan horumarino tignoolajiyada tallaalka kuwaas oo istiraatiiji ahaan muhiim u ah wax soo saarka, "ayuu yidhi.
Qiimaha dalbashada inoculants hektarkiiba waa US$4, halka qiimaha HOL, bacriminta nitrogen ee warshaduhu soo saarto, uu yahay qiyaastii US$150 ilaa US$200 hektarkiiba. Fermín Mazzini, madaxa Rizobacter Inoculants Argentina, ayaa tilmaamay: "Tani waxay muujinaysaa in soo celinta maalgashiga ay ka badan tahay 50%. Intaa waxaa dheer, xaaladda nafaqo ee dalagga oo soo roonaaday awgeed, celceliska wax-soo-saarka waxa lagu kordhin karaa in ka badan 5%."
Si loo daboolo baahiyaha wax-soo-saarka ee kor ku xusan, shirkaddu waxay soo saartay maro-mareeno u adkaysta abaarta iyo heerkulka sare, kaas oo hubin kara waxtarka daaweynta abuurka ee xaaladaha adag iyo kordhinta wax-soo-saarka dalagga xitaa meelaha xaaladaha xaddidan.
Tignoolajiyada tallaalka ee loo yaqaan induction biological induction waa tignoolajiyada ugu cusub ee shirkadda. Induction bayooloji waxay dhalin kartaa calaamadaha molecular si ay u dhaqaajiso hababka dheef-shiid kiimikaadka bakteeriyada iyo dhirta, kor u qaadka nodulation hore iyo waxtarka badan, taas oo kor u qaadeysa awoodda hagaajinta nitrogen iyo kor u qaadida nuugista nafaqooyinka looga baahan yahay digirta si ay u koraan.
"Waxaan siinaa ciyaar buuxda si aan u siino awoodeena cusub si aan u siino beeralayda alaabada wakiilka daaweynta waara. Maanta, tignoolajiyada lagu dabaqay beerta waa inay awood u yeelataa inay buuxiso rajada beeralayda ee wax-soo-saarka, iyadoo sidoo kale ilaalinaysa caafimaadka iyo dheelitirka nidaamka deegaanka beeraha. ,” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay Matías Gorski.
Waqtiga boostada: Nov-19-2021